Hayada SDWO Relief Project oo $400 doolar gudaansiisay reer danyar ah oo ka mida dadkii buulashu kaga gubteen xaafada danyarta ee State House kii hore ee Hargaysa
Hargeisa 31/05/2013 (SDWO.COM - SomalilandNews.net) Hayada SDWO Relief Project ayaa gudoonsiisay $400 oo doolar reer danyar ah oo ka mid ah dadka danyarta ah ee dabku ka baabiiyey dhowaan buulashii ay deganaayeen ee state house kii hore ee hargeysa. Lacagtan $400 ah ayaa naga soo gaadhay muwaadin degan dalka Fransiiska isagoo ugu soo talo galay dadka tabaalaysan ee dhibaatooyinku ku haystaan magaalada Hargeysa gudaheeda.
From left: Abdirashid Abdirahman oo gudoonsiinaya Khadar $400
Lacagta ayaan gudoosiinay Khadar Ducaale oo ah aabaha qoyska ka kooban 6 caruura iyo hooyadood si ay uga caawiso sidii sanadaqad yar oo hal qol ah oo hooy ay ka dhigtaan ugu dhisan lahaayeen. Sanadaqadaas yar ayaa lagu qiimeeyay $700 waxaanuna ilahay uga baryaynaa in inta ka dhimana uu ilaahay u soo fududeeyo inay soo helaan. Hadii akhristayaashu rabaan inay ka qaybqaatan mashruucan waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa emailka hoos ku qora.
Xaafada State House kii hore waxay ka mid tahay meelaha ugu darxumada iyo dhibaatada badan ee hadana ku dhextaala wadnahii caasimada oo ilaa 400 talaabo u jirta qasriga madaxtooyada Somaliland. Goobtan ayaa waxa ku nool kumaan danyar ah oo ay nolashu aad ugu adagtahay oo la tacaalaya sidii ay bal u helilahayeen wax ay afka 24kii saacadood ay hal mar geliyaan. Darxumada ka jirta ayaa waxa ugu weyn hooy la,aan iyadoo dhamanteed ay buulalyaryar ay goobtu ka koobantahay in badana uu buulashaasi dab laxaad lehi baabiiyey. Waxa kale oo ka mid ah darxumooyinka goobtan ka jira biyo, la,aan, cunto la,aan iyo caafimaad daro. Sanad ka hor ayay ahayd markii uu hal qof gaajo darteed uu ugu dhintay goobtan state house ka.
Hadaba akhriste waxaan kaa codsanaynaa inaad ka qaybqaadato mashaariicda SDWO Relief Project ee lagu taakulaynayo dadka dhibaataysan ee dalkii ku nool. SDWO Relief Project ayaa lacagaha lagu soo hagaajiyey intii mashaariicda aanu bilaabnay tan iyo 2007dii ee la gaadhsiiyey meelahii loogu soo deeqay ayaa ah $20411.00. labaatan kun oo doolar. Lacagahasii goobahii la gaadhsiiyey waxaad ka heli kartaa link kan - Click Here.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Qoyskan ayaa iyagoo wejigooga farxadi ka muuqato aad ugu soo duceeyay dadkii soo bixiyey sadaqadan iyo intii ka qaybqaadatay inay sadaqadani soo gaadho, waxanay ilaahay uga baryeen inuu ugu daro miisaanka xasanadaadka. aamiin
Khadar wuxuu noo sheegay inay dhibi ka haysato ilaalinta jiingadaha gubtay ee buulkoogii ka soo hadhay oo habeen walba badh la xadayo.